About Us - Weihai Tonglian qiray Makiinado Co., Ltd
. Weihai tonglian mashiin sax co, Ltd waxa uu ku yaalaa magaalada qurux xeebta - gobolka Shandong magaalada Weihai. takhasusay soo saarka ee kalluumaysiga, qalabka wax soo saarka golf, iyo ballaarinta guul of horumarinta tuubada weyn dhexroor galaas, mugga tube qalabka kale ee carbon warshadaha wax taaj oo duurka. Isla mar ahaantaana taageeraya caaryada muhiimka ah ee kala duwan, accessories biraha iyo usha kalluumeysiga tayo sare leh.
Shirkadda ilaa markii la dhisay sannadkii 2001, ka dib markii dabaysha iyo roobka qubeyska, tempering, tayada alaabooyinka la isku halayn karo iyo daacad ah sumcad adeegga, si ay u noqdaan hogaamiyaha warshadaha ugu xirfadeed. Product ugu fiican-iibinta dalka iyo dhoofiyo Japan, France, Suuriya, Hindiya, Vietnam, Taiwan iyo dalalka kale iyo gobolada, saamiga aad suuqa ka mid ah warshadaha hogaanka.
doonistii Tonglian inuu ku soo laabto kobciso "Tong Lian" koraan cunna ee ciidda bacrin ah ee maskaxda halkan, iyada oo waxyaabaha cusub, tayo wanaagsan leh iyo fikirka adeeg cusub, adeegga suuqa kalluumaysiga gudaha iyo warshadaha kale saaraha biibiile kooban, si kor loogu qaado horumarinta warshadaha!